यी हुन् संसारका १० धनी र खतरनाक आतंकवादी संगठनहरु - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ०३, २०७२ समय: १६:२८:५२
एजेन्सी । संसारभर नै साना ठूला आतंकवादी संगठनहरु क्रियाशील रहेका छन् । त्यसमध्ये केही यस्ता आतंकवादी संगठन छन् जसले आतंक फैलाउनुका साथै कमाईको मामलामा पनि अगाडि छन् ।
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको इस्लामिक स्टेट आइएस संसारकै सबैभन्दा धनी आतंकवादी संगठन हो । जसले हरेक महिना ५ करोड अमेरिकी डलर कमाउने गर्छ । सबैभन्दा धेरै आम्दानी भएका १० आतंकवादी संगठन यसप्रकार छन् ।
१. इस्लामिक स्टेट (आईएस)
बार्षिक कमाई करिब २ अरब अमेरिकी डलर
मुख्य आयस्रोत : तेल खानी, मानव तस्करी, लुटपाट, जबरजस्त असुली
सन् २०१४ को जुन महिनामा यो संगठनसँग करिब २ अरब अमेरिकी डलर थियो भने अहिले यो रकम वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
हमास प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आतंकवादी संगठन हो । सन् १९८७ को जनआन्दोलनका समयमा यसको गठन भएको हो । त्यसपछि यो संगठन इजरायली सेना विरुद्ध निरन्तर लडिरहेको छ । इजरायलले यसलाई मान्यता दिएको छैन । यसको वार्षिक आम्दानी १ अबर अमेरिक डलर बराबर रहेको छ । ट्याक्सका अलवा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने आर्थिक सहायता र डोनेशन यसको मुख्य आयस्रोत हो ।
एफएआरसी, कोलम्बियाको आम्र्ड रिभोल्युसनरी फोर्स हो । यो एउटा भूमिगत कम्युनिष्ट र साम्राज्यवाद विरोधी एक्टिभिष्ट समूह हो । यसको ५० वर्ष भन्दा लामो समय भएकामे हिंसामा मुख्य जिम्मेवारी छ । यसले लागुऔषध उत्पादन र तस्करी, अपहरण गरेर फिरौती, ट्याक्स असुली सुनखानी लगायतबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने गर्छ ।
हिजबुल्ला लेबनानको इरान समर्थित शिया आतंकवादी संगठन हो । लेबनानमा इजरायली घुसपैठ रोक्नका लागि १९८२ मा यसको गठन भएको थियो । शेख हसन नसरल्ला यसका प्रमुख छन । दक्षिणी लेबनानमा यसको ठूलो दबदबा रहेको छ । सरकारको समेत यसको अगाडि केही लाग्दैन । हिज्बुल्ला अमेरिका र इजरायलसहित पश्चिमीहरुलाई आफ्नो निशाना बनाइरहेको छ । यसले इरानको आर्थिक सहयोग र अनुदान, लागु औषधको उत्पादन र तस्करीलगायतबाट वार्षिक ५०० मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छ ।
तालिवान, पश्तुन आदिवासी बहुलको इस्लामिक विद्रोही संगठन हो । १९९६ देखि २००१ सम्म यसले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलसहित केही हिस्सामा शासन गरेको थियो । यसलाई पाकिस्तान, साउदी अरब र युएईको राजनीतिक समर्थन छ । मुल्ला मोहम्मद उमरको मृत्यु पश्चात मुल्ला अख्तर मन्सुर तालिवानका नयाँ प्रमुख छन् । यसको उद्देश्य अफगानिस्तानमा स्लामिक राज्य स्थापना गर्नु हो । अफिम र हेरोइनको उत्पादन, ट्याक्स असुली, अािर्थक सहायता र अनुदानलगायत बाट यसले वार्षिक ५०० मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छ ।
अलकायदा, संसारकै सबैभन्दा क्रुर आतंकवादी संगठन हो । यसले सन् २००१ मा अमेरिकामा खतरनाक आक्रमण गरेको थियो । ओसामा बिन लादेनको मृत्यु पश्चात आयमान अल जवाहिरी संगठनको नयाँ प्रमुख बनेका छन् । यसले पश्चिमी राष्ट्रहरुलाई आफ्नो मुख्य दुश्मन ठान्छ । यसले इसाई र यहुदीविरुद्ध युद्ध छेडिरहेको छ । अनुदान र आर्थिक सहायता, अपहरण गरेर फिरौती तथा लागु औषध तस्करीबाट यसले वार्षिक १५० मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने छ ।
७.लश्कर ए तैयबा
लश्कर ए तैयबा एक पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हो । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो प्रमुख आतंकवादी संगठन हो । यसको एउटै उद्देश्य कश्मीरमा अशान्ति फैलाउनु हो । आर्थिक सहायता र अनुदानका माध्यमबाट यसले वार्षिक १०० मिलियन डलर आन्दानी गर्छ ।
८. अल शबाब
अल शबाब अफ्रिकी मुलुक सोमालियामा अल कायदासँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो आतंकवादी संगठन हो । २००६ मा यसको गठन भएको हो । यसको उद्देश्य सोमालियाबाट विदेशी फौजलाई हटाएर इस्लामिक राज्य स्थापना गर्नु हो । यसले अपहरण, फिरौती, अवैध कारोबार र ट्याक्स असुलीबाट वार्षिक ७० मिलियन अमेरिकी डलर कमाउछ ।
बोको हराम, उत्तरी नाइजेरियाको सबैभन्दा खतरनाक आतंकवादी संगठन हो । यसको उद्देश्य इस्लामिक राज्य स्थापना गर्नु हो । यस आतंकवादी संगठनलाई आईएसआईएसको समेत समर्थन छ । अपहरण र फिरौती, ट्याक्स असुली, बैक डकैती र लुटपाटबाट यसले वार्षिक ५२ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउने गर्छ ।
१०. आइरिस रिपब्लिकन आर्मी
यसले वार्षिक ५० मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ । स्मगलिंग वा अवैध कारोबार, आर्थिक सहायता र अनुदानबाट वार्षिक ५० मिलियन अमेरिकी डलर कमाउछ ।